ကောင်းကင်ကို: Stereotype၊ လူမျိုးရေး ပြဿနာ နှင့် ကလေးကွက် (ခေတ်မောင်းဂျာနယ် အတွဲ (၂) မှ)
Posted by Kaung Kin Ko at 1:13 PM
Agree with this post. We should never speak out racist comments on criminal case. One's crime is his cruel, not his race or religion.
Its easy to point out the problem in common, and various way to describe your point of view to that problem. But, where is the solution? Action Plan? Suggestion?
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်တွေ ...
လက်ခံပါတယ်ဗျို့။ ဒါပေမယ့်လေ ..
လူဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ မွေးတာ မှန်ပေမယ့် ..
ခုခေတ်မှာကြီးဆိုးနေတာက နိုင်ငံဗျ ..
စာရေးသူများ အဲ့လို မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်
"One World One Nation" ဖြစ်အောင် အရင်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ..
Nice post,let me share please.
စာရေးသူက အကိုးအကားတွေ အထောက်အထားတွေနဲ့ ချက်ကျလက်ကျရေးသွားလိုက်တာ စာထဲမှာလုံးဝမျောသွားတယ်........အဲလောက်တောင် အရေးသားသိပ်ကောင်းတဲ့ သူက ဘာသာမဲ့ ဆိုဘဲ...........အဲဒီမှာတင် ပွဲက လုံးဝသိမ်းသွားပါတယ်...စိတ်တော့မကောင်းဘူးးးးးးးး.....................
စာရေးသူဟာ ဘာသာမဲ့လို့သာပြောတာပါ တရားမဲ့သူဟုတ်ပုံမရပါဘူး
မြန်မာအများစုက ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့ အရာကို ကိုယ်ကျင့်တရားမဲ့မှု ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကျုတ်မှူနဲ့ တွဲတွေးတတ်ပါတယ်
ဘာသာမဲ့ လို့ပြောသူ ( အကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေ) တွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တတ်နိုင်သလောက်ဆောင့်ရှောက်လေ့ရှိကြပါတယ်
သိပ်မျှတတဲ့ အရေးအသားပါပဲ ကောင်းကင်ကို။
ဒါနဲ့အမည်မဖော်လိုသူ ကော်မန့် ရှင်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာသာမဲ့ဆိုတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေကို နားလည်လိုက်နာတဲ့ဘာသာမဲ့တွေ အများကြီးပါ။ ဘာသာရှိပြီး တဖက်စောင်းနင်း အတ္တကြီး နေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝအောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို မြှင့်တင်ပါ။ လူတွေကို လွယ်လွယ် အထင်မသေးပါနဲ့ ။
ကိုညိမ်းနိုင် ပြောထားတာရဲ့ အဆက် ((...၊ဒီတော့မခက်
အကြီးအကဲက၊ဘယ်နိုင်ငံသားကမှ ခုနေ နိုင်ငံဆိုတာ
ကြီးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသား
အားလုံး လွတ်လပ်ညီမျှတန်းတူစွာ နေကြမယ်လို့
တာပဲ..၊သူတို့က ကံဆိုးစွာ နိုင်ငံမဲ့တယ်၊ဘယ်သူမှ
ကိုညိမ်းနိုင် ဆက်ပြောထားတာ။ ရခိုင်-ဘင်္ဂလီကိစ္စမှာကြည့်ဗျာ၊ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေ
က သဘောထားကြီးစွာနဲ့(တစ်ဘက်ကလည်း အစိုးရ
နိုင်ငံမဲ့၊ဘာကြောင့်မဲ့မဲ့ မဲ့ခဲ့ကြပြီ။ ဒီတော့ နေခွင့်ပေးသူ
အပေါ်ကပြောခဲ့သလို ဘာသာရေးရဲ့ သောက်တလွဲ
အိမ်ရှင် ဆိုတာမျိုး ပြောင်းပြန်လုပ်ဖို့ကျိုးစားလာတာ
တွေက အတော်ဆိုးလေတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ..
ကိုညိမ်းနိုင် ဆက်ပြောထားတာ။ ((ဒီတော့အိမ်ရှင်ဆိုတာကလည်း လူတိုင်းမှာ ကမ္ဘာမြေ
ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ဘယ်ရှိ
ကိုယ့်နိုင်ငံလေးကိုမက်တော့လည်း ဒီလို နိုင်ငံမဲ့တွေ
ပညာတတ်တွေရဲ့ ကလေးကွက်တွေကတော့ ရိုးပါ
(နောက်ထပ်ဆက်ပြီး ကိုငြိမ်းနိုင် ပြောထားတာ) ))၊ဂေး လို့ဆိုပေတဲ့ သူတစ်ခု
ကျွန်တော်ကတော့ ခုနေ မင်းဂေးလားလို့လာမေးရင်
ကိုငြိမ်းနိုင်ပြောထားတာတွေကို ကျနော် ပြောတော့လည်း ပြောပြောချင်းမှာ တက်ပြီး ပျောက်သွားတယ်ဗျ။ လေးငါးခု ခွဲပြီးတင်လိုက်တော့ ရသွားတယ်။ ကျနော် မင်္ဂလာဆောင်နေလို့ နောက်ကျသွားပြီး ခုမှ ဖတ်ရတာဗျ။
Gay right ပြောလို့ ဂေးမဟုတ်ဘဲ ဂေးအခေါ်ခံရလို့ မကြိုက်တာက ဂေးဆိုတာကို အထင်သေးလို့ မဟုတ်ကြဘူးဗျ။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အမှားအခေါ်ခံရလို့ မကြိုက်တာမျိုး၊ တံဆိပ်ကပ်ခံရတာကို မကြိုက်တာ၊ ဘောင်တခုထဲ အထည့်ခံလိုက်ရတာကို မကြိုက်တာရယ်၊ misinform လုပ်ခံရတာရယ်ကို မကြိုက်ကြတာဗျ။
Wow. This is so cool. I absolutely agree with what you just said.
ကျနော်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ကောင်းမှကောင်း အတွေးအခေါ် အိုင်ဒီယာကို ရစေတယ်။
Thura Zaw said...
I really really impress your point of view . I wish everybody would like to be think like that